प्रियंका चोपडा र निक जोनसको सम्बन्धविच्छेद ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियप्रियंका चोपडा र निक जोनसको सम्बन्धविच्छेद ?
काठमाडौं। बलिउड र हलिउडका मोस्ट वा’न्टेड जोडी मानिएका प्रियंका चोपडा र निक जोनसले आफ्नो सिजलिङ केमेस्ट्रीले सधैं फ्यानहरुलाई प्र’भावित पारेका छन् ।
तर, अब यी दुईको स’म्बन्धविच्छेदको खबरले फ्यानहरुलाई आश्चर्यमा पारेको छ । खासमा प्रियंका चोपडाले आफ्नो इन्स्टाग्राम बा’योबाट पति निक जोनसको थर ह’टाएकी छिन् । त्यसपछि प्रियंका र निकको स’म्बन्धविच्छेदको खबर भाइरल भइरहेको छ ।
यो खबरले दुवैका फ्यानबीच हलचल म’च्चिएको छ ।प्रियंका र निकको सम्बन्धविच्छेदको खबरले उनीहरुका फ्यानलाई झ’ट्का लागेको छ । फ्यानहरु यो कुरालाई लिएर अलमलमा पनि छन् कि आखिर प्रियंकाले आफ्नो सामाजिक संजाल बायोबाट आफ्ना पतिको थर किन ह’टाइन् ?
पति निकसँग सम्बन्धविच्छे’दको खबरबारे प्रियंकाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् तर प्रियंकाकी आमा मधुले भने उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको समाचारलाई पूर्ण रुपमा ग’लत भनेकी छिन् ।प्रियंका र निकको सम्बन्धवि’च्छेदको खबर भाइरल भएपछि प्रियंकाकी आमाले यस विषयमा प्र’तिक्रिया दिएकी छिन् ।
न्यूज १८ मार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै मधु चोपडाले प्रियंका र निकको सम्बनधवि’च्छेदको हल्लालाई ब’कवास र ग’लत बताइन् । उनले यस किसिमको झु’टो खबर न’फैलाउन अपिल पनि गरेकी छिन् ।